Ukutshala imali emakethe yamasheya aseJapan: i-Nikkei | Ezezimali Zomnotho
Ukutshala imali emakethe yamasheya aseJapan: i-Nikkei
INikkei yinkomba efanelekile yamasheya aseJapan, njengenye yezindlela ezingasetshenziswa ekutshalweni kwezimali ezimakethe zamasheya zaseYurophu. INikkei 225 iyinkomba yamasheya edume kakhulu emakethe yaseJapan futhi yakhiwa ngamasheya angama-225 asetshezi kakhulu asohlwini lwe- ITokyo Stock Exchange. Ukuba ngomunye wemibuthano yezezimali enenani elikhulu lebhizinisi kusukela inani lokuthengwa nokuthengiswa okwenziwe kuphezulu kakhulu, ngenani elikhulu lokusebenza phakathi kwabatshalizimali abavela kuwo wonke umhlaba. Kuze kube seqophelweni lokuba ngumthombo obalulekile wesethenjwa wengxenye enhle yabasebenzeli bezezimali beplanethi.
Ngokungafani namanye ama-indices, ukulinganiswa kubuyekezwe kwehla ezinyangeni ezisanda kwedlula, nge-15%, esimweni esiphakathi kuze kufike ku-19.862 amaphuzu kusuka ku-23.510 owedlule. Isizathu esiyinhloko salolu shintsho kube ukubukelwa phansi kwesivumelwano se-EPS sango-2020 esingu-12%, esingazange sisuswe ukwehla kwephrimiyamu yengozi. Ngaphezu kwalokho, kufanele kukhunjulwe ukuthi kulo nyaka kulindeleke ukuthi kwandiswe i-VAT ngo-Okthoba 2019. Sengiphetha, izincomo zabathengisi ukuthi bathengise amasheya abo kwazise isimo esikhona esiphakathi nendawo singaba ngu-1,4%, nesilinganiso semali esilinganisiwe ka 2%.
Ngakolunye uhlangothi, ine-PER engafakwanga kulesi simo ebingaba khona Amazinga we-16,8. Ngenkathi ngakolunye uhlangothi, kufaka isandla ekubuyekezweni okumanje okuyi-1,4% okwamanje. Lokho kusho ukuthi, kuncane kakhulu kunezimakethe zezimali zase-United States naseYurophu. Ngokwalokhu kubuka, akuyona inketho engcono yokwenza ukonga kube nenzuzo ngoba ayinayo indawo ekhangayo yokuphinda ibuyekeze ezinyangeni ezizayo. Akumangalisi ukuthi ukulinganiswa kwabo sekuvele kukhuphuke kakhulu ezinyangeni ezedlule futhi kunenkambiso yokuqondiswa kokulungiswa kuzo.
1 INikkei 225: kuzothengiswa okuningi kunokuthenga
2 Ukuhlukahluka kwakho kwe-macroeconomic
3 Izingozi zokusebenza eJapan
4 Amanani amancane awaziwayo
5 Izinzuzo zesikhwama saseJapan
INikkei 225: kuzothengiswa okuningi kunokuthenga
Kunoma ikuphi, izincomo ziqonde kakhulu ekuhlehliseni izikhundla kunokuthatha izikhundla kule makethe yezimali esempumalanga. Leyo izingozi ziphakeme kunezinyanga ezimbalwa ezedlule ngenxa yamazinga lapho le nkomba efanelekile yamasheya angamazwe omhlaba ihweba khona. Lapho ngalesi sikhathi kunamathuba amaningi okulahlekelwa yingxenye yemali esiyilondolozile kunokuyithola ngokuthengwa nokuthengiswa kwamasheya nokuphepha kwawo. Ngaphandle kokuthi imele umnotho oqine njengowaseJapan, onezinto ezifanele kakhulu ezingeni lomhlaba jikelele.
Ngakolunye uhlangothi, kufanele ubheke ukuthi ngabe kuwufanele noma cha iya kule ndawo yamazwe omhlaba ukuze wenze izimali zakho. Akufanele ukwenze kancane ngoba ungathola okunye ukumangala okungalungile kusukela manje kuqhubeke. Futhi akufanele ukhohlwe nganoma isiphi isikhathi ukuthi lokhu okudlalayo akuyona enye into futhi akukho ngaphansi kwemali yakho. Ngeke ube nokunye ongakwenza ngaphandle kokucabanga ngalesi sinqumo ongasenza emasontweni azayo ngenxa yokufaneleka kwaso. Ikakhulukazi uma ungakaze uhwebe ngalezi zimakethe ngamanani.
Ukuhlukahluka kwakho kwe-macroeconomic
Ukukhula komnotho kubuyisa amanani amahle ngokuya ngamandla wesikhathi esimaphakathi, esekelwa ukuthunyelwa kwangaphandle kanye nokusetshenziswa kwemali komphakathi. Izidingo zasekhaya ezizimele zizohlupheka ngenxa ye- ukwanda kwe-VAT kusuka ku-8% kuya ku-10% okwenzeka ngo-Okthoba owedlule. Ngenkathi ngakolunye uhlangothi, izilinganiso ze-EPS zibuyekezwa ziye phansi, njengoba izinkampani zaseJapan zinqena ukudlulisa ukukhushulwa kwamaholo nezindleko zezinto ezingavuthiwe zikhuphuke ziye kumanani okugcina. Inqubomgomo yezimali yaleli lizwe elibalulekile lase-Asia lizohlala lifaneleka kakhulu ngamanani wenzalo angekho emthethweni kuze kube sekupheleni kuka-2020. Elinye iphuzu okushiwo ngalo ukuthi i-yen kufanele igcine indlela eyehlayo ezinyangeni ezizayo ngokumelene nokushintshaniswa kwezinye izimali.
Yonke le mininingwane ekhonjisiwe evela emnyangweni wokuhlaziywa kweBankinter kufanele isetshenziselwe ukwenza isinqumo mayelana nokuthi abatshalizimali abancane nabaphakathi kumele benzeni ukwenza utshalomali lwabo lube semthethweni. Ngaphandle kokunye ukucatshangelwa kobuchwepheshe futhi mhlawumbe futhi kusukela ekubukeni kwezisekelo zalezi zimpahla zezimali ezibalwe emakethe yamasheya yaseJapan. Ngokwezinga elithile, konke kubonakala kukukhombisa lokho isikhathi sesihambile ukwenza imisebenzi kule makethe yamazwe omhlaba yokulingana. Ngokwalo mbono, ngeke kube khona okunye esingakwenza ngaphandle kokulinda ithuba elingcono kakhulu lokuthenga izinto ezithile kulo makethe wamazwe omhlaba.
Izingozi zokusebenza eJapan
Vele, ukusebenza kule makethe yezezimali kunezingozi zayo ngalesi sikhathi futhi kulula ngabo ukuthi baziwe ngabatshalizimali abancane nabaphakathi. Ukuze uvikele ezimeni ezingafuneki ngalokhu. Akumangalisi ukuthi kuyimakethe yezezimali eguquguqukayo kakhulu lapho kunomehluko obanzi phakathi kwamanani aphezulu kanye namanani amancane wamanani esitokisi sawo. Kakhulu kakhulu ezimakethe zezwekazi elidala selokhu ukwehluka kwabo kungasondela ku-5% noma ngisho nangamandla amakhulu kakhulu. Ngobungozi obulandelayo obenzeka ekunyakazeni okuvulwe ngabenzeli bezezimali.
Ngenkathi ngakolunye uhlangothi, singekhohlwa ukuthi ukuvula izikhundla kule makethe yezimali kusho ukuthatha amakhomishini aphezulu. Cishe kuphindwe kabili kwalokhu okwenziwa endaweni esiseduzane. Ngalokho ebesizoba nakho thuthukisa inzuzo imisebenzi yokwenza utshalomali lube nenzuzo ethe xaxa. Ngakolunye uhlangothi, kufanele kubhekwe ukuthi izinkomba zaseJapan zihweba ebusuku emazweni aseYurophu futhi lokhu kungaba enye inkinga yokwenza utshalomali lube semthethweni ngokuphepha okuphelele. Lokho kusho ukuthi, asikwazi ukubalandela njengakuma-stock indices ezwekazi elidala.
Amanani amancane awaziwayo
Lapho sihlola ubungozi obudalwa yilezi zinhlobo zokusebenza, akufanele sinciphise ubungozi obuhlobene nokungazi izinkampani zabo ezisohlwini. Noma okungenani iningi labo, okungcono kakhulu. Kuze kube seqophelweni lokuthi asazi ukuthi bakwemiphi imikhakha, kuyini ukuvela kwabo ezimakethe zezimali noma izinguquko zabaninimasheya abanazo ngaso sonke isikhathi. Lesi yisimo esingasilimaza lapho senza elinye isu lokutshala imali emakethe yamasheya yaseJapan. Ngaphandle kwezinye izindlela zokutshala imali ezisebenzisa ubuchwepheshe obuncane.
Lokhu kushoda kolwazi kungaba nomphumela wokuthi utshalomali lwethu aluhanjiswanga ngendlela efanele nokuthi ngisho singalahlekelwa yimali ekuthatheni izikhundla. Okuthile okungagwenywa ngokukhetha izimakethe ezaziwa kakhulu zama-equity lapho sisebenza khona nobuningi obuthile. Ngakho-ke, imakethe yamasheya yaseJapan ihloselwe abatshalizimali abanephrofayili enolaka abafisa ukuzama ezinye izimakethe zezezimali, yize inqobo nje uma isimo sifuna lokhu kuhamba kusukela manje kuqhubeke. Ungalokothi kubatshalizimali abalondolozayo noma abavikelayo abadinga ezinye izindlela zokutshala imali.
Izinzuzo zesikhwama saseJapan
Ngenkathi ngokuphambene nalokho, le misebenzi nayo inasohlangothini lwayo oluhle futhi ingasiza ukuhambisa ngendlela efanele utshalomali nganoma yisiphi isikhathi. Enye yazo kulapho a ukuncipha kokukwazi ukubonga yezimakethe zamasheya aseNtshonalanga futhi ungasebenzisa lo mthombo ukwenza imali yakho izuze ngeziqinisekiso ezinkulu zempumelelo. Kepha lokhu kusebenza kwenzeka izikhathi ezimbalwa kakhulu ngonyaka nangokunyakaza okuthile. Ngakolunye uhlangothi, izikhathi ezihamba phambili kule makethe yezezimali zibonakala kakhulu futhi ungathuthukisa inzuzo yokutshala kwakho ngemali ngamaphesenti aphezulu kunangaphambili.
Kuyafaneleka futhi ukuhlola isici esihlobene nebanga elisuka emakethe yezimali elikhethekile njengaleli ikakhulukazi. Uma ufuna ukutshala imali emakethe yamasheya yaseJapan unenketho enolaka kangako ngokusebenzisa i- izimali zokutshala izimali ngokususelwa kule ndawo yomhlaba. Njengamanje unokunikezwa okuphawulekayo okuvela ezinkampanini zokuphatha zamazwe ngamazwe ezenziwe ngaphansi kwamasu ahlukene wokutshala imali. Ngisho ukuwahlanganisa nezimpahla zezimali ezingenayo ezihleliwe ukuze uvikele izikhundla zakho ezimweni ezimbi kakhulu ezimakethe zezimali.
Okokugcina, izimali zokutshalwa kwezimali zalezi zici zihloselwe amatemu amade okuhlala unomphela futhi kuzo zonke izimo okulingene nokude. Ukwakha isikhwama sokonga esizinzile eminyakeni embalwa ezayo. Ngenzuzo yokuthi ungadlulisa imali mahhala uma izinto zingathuthuki njengoba abanikazi bazo bekulindelekile. Ngochungechunge lwamakhomishini ancintisana kakhulu kunezinye izimali ezisuselwe kwezinye izindawo. Kunoma ikuphi, kuyindlela entsha yokutshala imali ongayisebenzisa nganoma yisiphi isikhathi futhi kunoma yisiphi isimo. Ngaphandle kwezinye izindlela zokutshala imali ezisebenzisa ubuchwepheshe obuncane.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Imikhiqizo yezezimali » Ibha » Ukutshala imali emakethe yamasheya aseJapan: i-Nikkei
Ukuphepha okuthengwe ngokweqile